ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပွဲဦးထွက် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်တော့မယ့် အဖွဲ့ - Yangon Media Group
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပွဲဦးထွက် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်တော့မယ့် အဖွဲ့
ဆိုးလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃
နာမည်ကျော် ကေပေါ့ပ်အမျိုးသား အဆိုတော်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် Seventeen သည် လာမည့်မေလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ပွဲဦးထွက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Pledis အင်တာတိန်းမန့်က ”အဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးပါဝင်သည့် ၎င်းတို့အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ယိုကိုဟားမား အမိုးဖွင့်ကွင်းရှိ ပရိသတ် ၁၅ဝဝဝ ရှေ့တွင် “SEVENTEEN 2018 JAPAN ARENA TOUR SVT” အမည်ရှိ ဖျော်ဖြေပွဲကိုကျင်းပစဉ် ယင်းသတင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့် သီချင်းများကို သီဆိုခဲ့ ပြီးနောက် ၎င်းတို့အဖွဲ့က ”ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်အတိုင်းလိုက်လာကြမှာလား၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပွဲဦးထွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အဖွဲ့၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင်ထွက်ရှိခဲ့သော “Director’s Cut” အမည်ရှိ အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Tower Records နှင့် Oricon တို့ရှိ အပတ်စဉ် အယ်လ်ဘမ် ရောင်းအားဇယားတွင် စတုတ္ထနှင့် ဒုတိယနေရာ အသီးသီး၌ ရပ်တည်ခဲ့သည်။
အေဂျင်စီက ”သူတို့ရဲ့ တရားဝင်ပွဲဦးထွက် မတိုင်ခင်မှာ တောင် Seventeen အဖွဲ့ဟာ ဂျပန်မှာ နာမည်ကျော်ကြားမှု ရှိနေကြောင်း သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ ယိုကိုဟားမားအမိုးဖွင့် ကွင်းမှာပြုလုပ်မယ့် ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ်တွေအားလုံး ရောင်းကုန်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မေ ၃ဝ ရက်၌ ပွဲဦးထွက်ပြီး နောက် အနုပညာရှင်များအနေဖြင့် အဖွဲ့က ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များကို ပရိသတ်များအနေဖြင့် စောင့် မျှော်ပေးကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ခင်ပွန်းသည်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ မင်းသမီး ကလဲရာဖွိုင်း
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးခရီးမှာ အကျပ်အတည်း တွေ့နေသော်လည်း ပျက်စီးခြင်းမျိုးမဟုတ်သေး
ပိုဗက်ကင်ကို အနိုင်ယူပြီး ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဆုများကို ဂျော်ရှူအာဆက် ထိန်း၊ နောက်ထပ် ပြိုင??
ချန်ပီယံလိဂ် အကောင်းဆုံး အသင်းတွင် စီရော်နယ်ဒိုနှင့် မက်ဆီတို့ ပါဝင်
ဆန်ရောင်းရင်း ပါတီစည်းရုံးရေး လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အစိုးရဆောင်ရွက်ချက်များ တိုးတက်မှုမရှိဟု ?
လစာအများဆုံး ဘောလုံးသမားစာရင်းတွင် ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ ထိပ်ဆုံးမှ ဦးဆောင်
သံမဏိနှင်းဆီဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ အသတ်ခံရမှုမှ တရားခံနှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂ဝ စီ ချမှတ်